Rehefa mba metimety amin’ny mpitondra fanjakana indray, dia mirarakopana ny hoe : tsy afaka ny hiolonolona eto isika fa tsy maintsy misokatra sy miara-miasa amin’ny avy any ivelany. Ny vola hanatanterahantsika fifidianana izay ho mpitondra eto amin’ny firenena aza anefa hitalahoana any amin’ny vahiny. Fa mizotra mankaiza marina isika ity e ? Mbetika maneho fa be hambom-po sy milaza fa tena tany manana ny fiandrianam-pirenana ka tsy tokony hitsabahan’ny hafa. Ny fiaraha-miasa tamin’ny mpamatsy vola mahazatra aza nohamavoina sy nohambaniana tany aloha, ka niresahina fa efa vonona amin’ny lafiny rehetra na ara-bola na ara-teknika ny kandida Rajoelina fa ny fahatongavana amin’ny fitondrana sisa andrasana, ary isika za no hampindram-bola ny Nosy Kaomoro. Nambara fa efa vonona ny famatsiam-bolan’ny IEM, kanefa na ny fiaraha-miasa amin’ny Maraokanina katsahina mafy aza anie, ka tetikasa efa nifanarahana tamin’ny fanjakana Rajaonarimampianina no tiana hamafisina e ! Tonga eo amin’ny fahefana Atoa Andry Rajoelona, dia mitangirika vola etsy sy eroa, mitady fiaraha-miasa ary sy atsia, ary tena mandany vola tsy toko tsy forohana hitadiavana làlana any ivelany, fa tsy hita izay vokatra. Nodiavina i Addis-Abeba, nilana ranondranony i Maorisy, nikarohana fiaraha-miasa i Kenya, ary toa natao tsara doka i Sénégal kinanjo inona no teo ? Izay ilay hoe : ny vava no tsy atao be dia ny mamerina azy no sarotra. Na inona aloha ambara ho fiandrinam-pirenena, dia ny vahiny no mifehy ny toakarena sy homena tombondahiny eto. Ny mpandraharaha Malagasy sokajiana ho mifanitsaka bizina amin’ny olon’ny mpitondra enjehina sy gadraina, ary voizina ny resaka fampiharana ny tany tan-dalàna. Ireo matevi-koditry ny afera maloto kanefa mahay milomano ao anaty fitondram-panjakana kosa na vahiny na teratany tsy mba voakitikitika. Aiza ho aiza amin’izany ny ambara fa fitiavan-tanindrazana sy fiandrianam-pirenena. Tsy sanatria finiavana hivoy fankahalana vahiny, fa ny olona matoa mitady làlana sy te handraharaha eto ary mitangirika fiaraha-miasa dia mikendry tombony ho azy. Na inona na inona holazaina dia ny Malagasy no manana ny fitiavana ny tanindrazany fa tsy ny vahiny, ka eo no tokony hahamailo antsika satria ny hita eto aloha, dia ezahina halentika ny mpandraharaha Malagasy heverin’ny mpitondra fa mifanipa-kevitra ara-politika aminy, fa ny vahiny mpiara-mibizina no homena vahana. Aiza ho aiza ilay ambara fa fitiavan-tanindrazana sy fiandrianam-pirenena?